15 Milyan ayaa ku dhalatay walina dhalmo yarida waa caqabad taagan! | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / 15 Milyan ayaa ku dhalatay walina dhalmo yarida waa caqabad taagan!
15 Milyan ayaa ku dhalatay walina dhalmo yarida waa caqabad taagan!
Posted by: Mahad Mohamed January 22, 2019
Himilo FM – Tirada dadka ku dhasha dalka Shiinaha ayaa hoos u dhacday iyadoo 15 Milyan oo dhalasho laga diiwaan geliyay dalkaasi sannadkii dhammaaday. Waxay tiradan ka yartahay inta dhalatay sannadkii 2017 oo lagu qiyaasay 17 Milyan oo qofood.
Shiinaha ayaa qoysaska ku dhiira geliya inay dhalaan inka badan hal cunug, waxaana taasi oggolaanaysa siyaasadda cusub ee lagu badalay siyaasadii mudada dheer ee “Qoyska kasta iyo Hal cunug.”
Shiinaha oo ah dalka ugu dadka badan caalamka oo ay ku nool yihiin 1.4 Bilyan oo qofood ayaa doonaya inuu dhiira geliyo dhalmada badan si loo helo dhallinyaro cusub.
Khubarada ayaa aaminsan in kororka sicirka guryaha, waxbarashada iyo caafimaadka inaysan dhiira gelineyn dhalmo badan. Waxaa intaa dheer in haweenka Shiinaha doorbidaan inay horumariyaan xirfadooda shaqo iyaga oo mar danbe guursada.
Wang Ving oo culuumta bulshada ka dhiga jaamacadda California ayaa sheegay in tirada dadka ku dhashay Shiinaha tahay middii ugu hooseysay ee la diiwaan geliyay marka laga yimaado sannadkii 1960-kii oo ay dalkaasi ka jirtay macluul.
Shacabka Shiinaha ayaa la filayaa inay gaaraan 1 Bilyan iyo afar boqol oo Milyan oo qofood marka la gaaro sannadka 2029-ka.
Sida laga soo xigtay QM, Tirada dalka ugu dadka badan caalamka ayaa hoos u dhici doonta marka la gaaro sannadka 2030-ka.
Previous: Cristiano Ronaldo oo maanta hortagaya maxkamad
Next: Luxembourg oo gaadiidka bilaash lagu raacayo si loo yareeyo saxmadda wadooyinka!